Discover thousands of unique mobile အက်ရှင်. We are constantly updating daily, along with the best mods available here
ဂီတ - အသံ
သတင်း & Magazines
ဗီဒီယိုဖွင့်စက်များ & အယ်ဒီတာများ
အိမ် › ဂိမ်းများ › Archive by Category "အက်ရှင်"
BehApk - အခမဲ့ APK Android ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။ - © မူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည်
သင့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်မှုများကို မှတ်မိပြီး ထပ်ခါတလဲလဲလည်ပတ်မှုများပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သင့်အား အသက်ဆိုင်ဆုံးအတွေ့အကြုံများပေးနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်ရှိ cookies များကို အသုံးပြုပါသည်။. "လက်ခံသည်" ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်, ကွတ်ကီးအားလုံးအသုံးပြုရန် သင်သဘောတူသည်။.
ကျွန်ုပ်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို မရောင်းပါနှင့်.
ဝဘ်ဆိုက်တွင် သင်ရှာဖွေနေစဉ်တွင် သင့်အတွေ့အကြုံကို မြှင့်တင်ရန် ဤဝဘ်ဆိုဒ်သည် ကွတ်ကီးများကို အသုံးပြုပါသည်။. အဲဒီထဲက, လိုအပ်သလို အမျိုးအစားခွဲထားသော cookies များသည် ဝဘ်ဆိုဒ်၏ အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် သင့်ဘရောက်ဆာတွင် သိမ်းဆည်းထားသည်။. ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤဝဘ်ဆိုက်ကို သင်အသုံးပြုပုံကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး နားလည်နိုင်စေရန် ကူညီပေးသည့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းကွတ်ကီးများကိုလည်း အသုံးပြုပါသည်။. ဤကွက်ကီးများကို သင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သာ သင့်ဘရောက်ဆာတွင် သိမ်းဆည်းထားမည်ဖြစ်သည်။. ဤ cookies များမှ ဖယ်ထုတ်ရန် ရွေးချယ်ခွင့်လည်း ရှိပါသည်။. သို့သော် အဆိုပါ cookies အချို့ကို ဖယ်ထားခြင်းသည် သင်၏ရှာဖွေမှုအတွေ့အကြုံကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။.
ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်အတွက် လိုအပ်သော cookies များသည် လုံးဝမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။. ဤ cookies များသည် ဝဘ်ဆိုက်၏ အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် လုံခြုံရေးအင်္ဂါရပ်များကို သေချာစေသည်။, အမည်မသိ.
cookielawinfo-checkbox-analytics 11 လများ ဤကွက်ကီးကို GDPR Cookie သဘောတူညီချက် ပလပ်အင်က သတ်မှတ်ထားသည်။. အမျိုးအစားထဲရှိ ကွက်ကီးများအတွက် အသုံးပြုသူ၏သဘောတူညီချက်ကို သိမ်းဆည်းရန် ကွတ်ကီးကို အသုံးပြုသည်။ "ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပါ။".
cookielawinfo-checkbox-functional 11 လများ အမျိုးအစားအတွင်းရှိ ကွက်ကီးများအတွက် အသုံးပြုသူ၏သဘောတူညီချက်ကို မှတ်တမ်းတင်ရန်အတွက် ကွတ်ကီးကို GDPR ကွတ်ကီးသဘောတူညီချက်ဖြင့် သတ်မှတ်သည်။ "အလုပ်လုပ်တဲ့".
cookielawinfo-checkbox-လိုအပ်သော 11 လများ ဤကွက်ကီးကို GDPR Cookie သဘောတူညီချက် ပလပ်အင်က သတ်မှတ်ထားသည်။. အမျိုးအစားအတွင်းရှိ ကွက်ကီးများအတွက် အသုံးပြုသူ၏သဘောတူညီချက်ကို သိမ်းဆည်းရန်အတွက် ကွတ်ကီးများကို အသုံးပြုသည်။ "လိုအပ်သော".
cookielawinfo-checkbox-အခြားသူများ 11 လများ ဤကွက်ကီးကို GDPR Cookie သဘောတူညီချက် ပလပ်အင်က သတ်မှတ်ထားသည်။. အမျိုးအစားထဲရှိ ကွက်ကီးများအတွက် အသုံးပြုသူ၏သဘောတူညီချက်ကို သိမ်းဆည်းရန် ကွတ်ကီးကို အသုံးပြုသည်။ "တခြား.
cookielawinfo-checkbox-စွမ်းဆောင်ရည် 11 လများ ဤကွက်ကီးကို GDPR Cookie သဘောတူညီချက် ပလပ်အင်က သတ်မှတ်ထားသည်။. အမျိုးအစားထဲရှိ ကွက်ကီးများအတွက် အသုံးပြုသူ၏သဘောတူညီချက်ကို သိမ်းဆည်းရန် ကွတ်ကီးကို အသုံးပြုသည်။ "စွမ်းဆောင်ရည်".
viewed_cookie_policy 11 လများ ကွက်ကီးကို GDPR Cookie Consent ပလပ်အင်က သတ်မှတ်ထားပြီး အသုံးပြုသူ ကွတ်ကီးအသုံးပြုမှုကို ခွင့်ပြုသည်ဖြစ်စေ မသိမ်းဆည်းရန် အသုံးပြုသည်. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကို သိမ်းဆည်းမထားပါဘူး။.
လုပ်ဆောင်ချက်ရှိသော cookies များသည် ဆိုရှယ်မီဒီယာပလပ်ဖောင်းများတွင် ဝဘ်ဆိုက်၏အကြောင်းအရာကို မျှဝေခြင်းကဲ့သို့သော လုပ်ဆောင်ချက်အချို့ကို လုပ်ဆောင်ရန် ကူညီပေးသည်။, တုံ့ပြန်ချက်များကိုစုဆောင်းပါ။, အခြားတတိယပါတီအင်္ဂါရပ်များ.
လည်ပတ်သူများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်ရာတွင် ကူညီပေးသည့် ဝဘ်ဆိုက်၏ အဓိကစွမ်းဆောင်ရည် အညွှန်းကိန်းများကို နားလည်ပြီး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် Performance cookies ကို အသုံးပြုပါသည်။.
ဝဘ်ဆိုက်နှင့် ဧည့်သည်များ မည်ကဲ့သို့ တုံ့ပြန်ပုံကို နားလည်ရန် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ကွက်ကီးများကို အသုံးပြုသည်။. ဤ cookies များသည် လာရောက်လည်ပတ်သူအရေအတွက် တိုင်းတာမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။, ခုန်နှုန်း, အသွားအလာအရင်းအမြစ်, စသည်တို့.
ကြော်ငြာကွက်ကီးများကို ဧည့်သည်များအား သက်ဆိုင်ရာ ကြော်ငြာများနှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ကမ်ပိန်းများ ပေးဆောင်ရန် အသုံးပြုပါသည်။. ဤကွက်ကီးများသည် ဝဘ်ဆိုက်များတစ်လျှောက် လာရောက်လည်ပတ်သူများကို ခြေရာခံပြီး စိတ်ကြိုက်ကြော်ငြာများကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် အချက်အလက်များကို စုဆောင်းပါသည်။.
အခြားအမျိုးအစားခွဲခြားမထားသော ကွတ်ကီးများသည် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး အမျိုးအစားအဖြစ် မခွဲခြားရသေးသော အရာများဖြစ်သည်။.
သိမ်းဆည်းပါ။ & လက်ခံပါ။